Nhau - Kugadzira maitiro esimbi isina sintered firita chinhu
Reaf Disc Filter
Wedge Wese Sefa
Mafirita akasiyana siyana
Kugadzira maitiro esimbi isina sintered firita chinhu
Iyo firita yezvinhu yesimbi isina simbi sintering mambure inonzi seye simbi isina sintering firita chinhu. Iyo firita chinhu chakagadzirwa neyakajairwa mashanu matete esintering mambure ne superposition uye vacuum sintering. Iyo firita yezvinhu yesimbi isina tsvina sintering skrini inogadzirwa nesimbi isina simbi sintering mesh, iyo yakakamurwa kuita zvikamu zvishanu: inodzivirira dura, firita rukoko, yakapararira dura, furemu layer uye furemu layer. Sefa zvinhu zvine yunifomu uye yakatsiga kuchenesa kunyatsoita, yakasimba simba uye kuomarara, uye inoyevedza firita zvinhu zvenguva nezvinodiwa zvakanyanya zvekumanikidza simba uye yunifomu yekutsvaira chaiyo.
Musiyano mukuru uripo pakati pesimbi isimbi sintered mesh firita chinhu uye zvimwe firita zvinhu iko kushandiswa kweiyo hombe nhamba yeakakwira-chaiyo maitiro ekuchaya maitiro. Iyo sintering firita yezvinhu yesimbi isina simbi mesh inogadzirwa nesintered firita cartridge mushure mekucheka uye yakakwirira-chaiyo yekumonera. Chinhu chakakosha kwazvo cheiyo sintering firita cartridge iko kushandisa kweiyo hombe nhamba yeiyo yepamusoro-chaiyo tekinoroji yekutengesa. Iyo sintering firita cartridge yakasungwa neyakaomeswa mushure mekuumburuka. Iko kutenderera kweiyo yakasunganidzwa yekubatanidza kunofanirwa kuve nechokwadi. Musono wewelding unofanirwa kururamiswa mushure mekusimbisa kuti iyo yose itaridzika kuve yakanaka.
Iko kusarudzwa kwemidziyo mbishi, kunyatso kudzora uye kutwasuka kwenzira zvinhu zvitatu zvakakosha kwazvo zveichi sefa chinhu chesimbi isina tsvina sintering mesh. Izvo zvigadzirwa mumusika zvakasanganiswa nemeso ehove, zvakaderera zvigadzirwa, kuzadza kwakadzika uye kukwirira kusefa kwekuchenesa, uye hwakaomarara kugadzira tekinoroji, izvo zvinoita kuti zvimwe zvigadzirwa zvipe mitengo yakaderera kwazvo. Vatengi vanofanirwa kukwenya maziso avo kuti vadzivise kurasikirwa kunorema kupfuura kuwana uye kukonzera kurasikirwa kwetsaona dzekugadzira.
Musiyano mukuru uripo pakati pesimbi isimbi sintering firita chinhu uye mamwe mafirita zvinhu iko kushandiswa kweiyo hombe nhamba yeakanyanya-chaiyo maitiro ekumwaya. Iyo simbi isina sintered sintered simbi mesh yakasungwa mushure mekuumburuka. Iko kutenderera kweiyo simbi ichave inochengetedzwa uye iyo weld ichave yakaenzana mushure mekusimbisa, kuitira kuti iyo yose itaridzike kuva yakanaka uye kugadzirira inotevera inotevera yakazara kuwelda.
Ipapo, iyo sintering mesh yakasungirirwa pamucheto unovhara kumakona ese nesimbi isina waya yekumonera waya. Panguva yekumonera, iyo sintering mesh haigone kutsva kudzivirira yemuno kupisa uye kuparara, zvichikonzera iyo firita element kutadza kutamba yekusefa basa. Naizvozvo, argon gasi chengetedzo inofanirwa kuitirwa kwenzvimbo yemoto panguva yekumonera. Zvese zviri pamusoro apa zvekutemesa matanho zvinofanirwa kuve nemidziyo yekumisikidza uye yakakosha michina yekuwelda, uye hunyanzvi hwekutengesa hunyanzvi hwevashandi zvakare hwakasimba. Mukana wekudonha kwemhepo mune yekumanikidza renji mushure mekuwotera bubble bvunzo, zvese mafirita zvinhu zvichabviswa.
Post nguva: Dec-02-2020
© Copyright - 2010-2020: All Rights Reserved. Hot Zvigadzirwa - Sitemap
Sefa Yemvura, Stainless Simbi Mhepo Kuchenesa, Industrial Gasi Sefa, YeMotokari Sefa, Mafirita Emhepo, Stainless Simbi Sefa,